I-Gallop Through the Heartland yase-Equestrian Ireland - IntoKildare
Isifunda Esiphelele, Ukuvakasha kokuqala, Izinto Ozozenza
Izinsuku ezi-3, amakhilomitha angama-238, amamayela ayi-148
Umzila: IKildare iya eLouth, idlula eWestmeath naseMeath
Izici: I-Irish National Stud, ICurragh
Ukubuka konke ngohambo
Thokozisa injabulo esheshayo, izinkanuko nobumnandi obumsulwa bezinhlanga kulolu hambo lwezinsuku ezintathu lwamahhashi. Kusuka kweminye yemigwaqo ekhetheke kakhulu emhlabeni kuya emadlelweni aluhlaza athule kanye nasezinkundleni zempi lapho amahhashi empi aqophe khona umzila emlandweni womlando. Lolu hambo luzokuletha enhliziyweni yezwe lamahhashi lase-Ireland, kunokuningi okumangazayo endleleni.
Usuku 1: 31 amaminithi, 12 km, 7 amamayela
Ukuduma kwama Hooves, ukushaya kwenhliziyo, ukujabula kwezihlwele - setha imijaho.
Kungakapheli imizuzu engama-20 omunye nomunye, uzothola izifundo ezimbili ezinhle kakhulu zomjaho eYurophu: EPunchestown noThe I-Curragh. Ngomuzwa ohluke kakhulu, iCurragh Military Museum eseduze igxila emlandweni wezempi wendawo embukisweni othakazelisayo oveza ukuthi lezi zizathu zasetshenziselwa kanjani amaJacobites ngo-1686, kanye namahhashi abo empi, namasosha aseBrithani ngesikhathi seWWI. Unqamula emadlelweni aluhlaza, lungisa izinto zakho ngokulandelayo ku- I-Irish National Stud. Lapha, ama-stallion ahlangana nenkanyezi - noma okungenani babejwayele - ngenxa yezinkolelo-ze zomsunguli we-stud, uColonel William Hall Walker. UColonel wenza ishadi lokuzalwa lembongolo ngayinye, futhi uma engazithandi izinkanyezi, le mbongolo yayizothengiswa. Emnyuziyamu wesitebele ungafunda ishadi lembongolo ngeshwa elibizwa ngokuthi yi-Lord of the Sea: "USaturn endlini yakhe yesi-5… umenza angatheni kangako kwezomjaho noma ezinhlosweni zokufundela… akusizi ngalutho ngaphandle kokuthengisa." Ukufundwa kwezinkanyezi ngama-Equestrian kubonakala kude ngamamayela ayisigidi eduze Izingadi zaseJapan, eyakhiwe futhi nguWalker ngosizo lwengcweti yezolimo uTassa Eida waseJapan. Yindawo enhle yokulahlekelwa isikhathi.
Amaphuzu Wentshisekelo: Umjaho wasePunchestown, ICurragh I-Racecourse, iCurragh Military Museum, I-Irish National Stud & Izingadi zaseJapan
Uma unesikhathi esithe xaxa
KwaGoffs, okuyinkampani ehamba phambili yokuthengisa amagazi e-Ireland, kubanjwa ukuthengiswa kwegazi okuyisishiyagalombili ngonyaka. Bangumcimbi othokozisayo ogcwele isenzo esisheshayo namahhashi ayinqaba. E-Kilcullen, UBernney Brothers Saddlery, eyasungulwa ngo-1880, ingumbukiso wobuciko oyingqayizivele, ubuchwepheshe nolwazi lwamahhashi.
Usuku 2: 2 hrs 13 amaminithi, 114 km, 71 miles
Umzila: IKildare iya eWestmeath
Amaphuzu Wentshisekelo: IKildare Village, ILullymore Heritage & Discovery Park, Umjaho Wezemidlalo waseKilbeggan
Qala ngokwelashwa okuncane eKildare Village, indawo enkulu yokuthengisa yase-Ireland, ngaphambi kokufaka uphethiloli ngamanye ama-croissants eLe Pain Quotidien, indawo yokuqala e-Ireland yochungechunge oluphezulu lwe-boulangerie.
I-verdant hedgerows ibeka umzila wakho oya eLullymore Heritage naseDiscovery Park. Manje ipaki elingaphandle elinomdlandla elineFamine Cottage, iBiodiversity Walk kanye neFairy Village, iLullymore yake yaba yindawo yokuhleleka eyindilinga. Ekuqaleni kwekhulu le-18, konke lokho kwashintsha lapho wonke umuntu ebulawa ngaphandle kwendela eyodwa, uThomas Foran.
Qhubeka nomzila wakho ukuze ubonwe yiGran Canal - phakathi kuka-1834 no-1852 izinsizakalo ze "fly boat" zasebenza la manzi, ngamahhashi amabili adonsa izikebhe ngejubane le-7mph (kwathatha amahora ayi-13 ukusuka eDublin kuya e-Athy!)
Ngokulandelayo yiKilbeggan Racecourse, echazwe yiSunday Times njengeyintelezi "ebeka imigwaqo emikhulu - njengeRoyal Ascot - emthunzini". Ukusukela emuva ngawo-1840s, le nkambo inezindaba eziningi ongabelana ngazo, futhi - ngokuzayo lapho ubeka ukubheja kwakho, gwema ukucabanga ngomnqobi weGrand National ka-1916 obefanele ahambe aye ekhaya ngenxa ye-Easter Rising!
Vakashela i-distillery yase-Ireland endala enamalayisense e-Kilbeggan. Bhuka kusengaphambili ukuthola ubuqili bezokuhweba, bese uthola ukuthi ngabe i-distillery isetshenzisiwe ngempela yini. Noma ungene ku-Roche's Pub eDonadea. Cha - awucabangi izinto. Le ndawo yokucima ukoma icwila kancane emgodini eyakhelwe kuwo. Eyakhelwe ngawo-1800, ibilokhu icwila isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka.
Usuku 3: 1 hr 47 amaminithi, 113 km, 70 miles
Amaphuzu Wentshisekelo: I-Navan Racecourse, iBrú na Bóinne, Isikhungo Sokuvakasha se-Battle of the Boyne, eLaytown Strand
Ukubeka ithoni ngokuphelele emzileni wanamuhla ukuzulazula kamnandi kuzungeze izitshalo nezimbali ezingama-5,000 19 ngesitayela se-Altamont Gardens sika-Carlow esimangalisa ngekhulu le-XNUMX.
Le ngqikithi eluhlaza ilandelwa njengoba uqhubeka uye “eNsimini yase-Ireland”, lapho amagquma akwaWicklow eqhakaza khona ngemifino emihle egobhoza ngombala onsomi. Kepha okokuqala, idolobha laseWicklow regales elinezinganekwane ezinesihluku kusukela ekuqaleni kwekhulu le-18 eWicklow Gaol. Phakathi kwazo, izindaba zeziboshwa ezisuswe eWicklow zayiswa e-Australia, kwesinye isikhathi zenzelwe ubugebengu bokweba isinkwa.
Kusuka kulawa abizwa ngokuthi 'Amasango Esihogo' emuva enhliziyweni yokuthula kukaWicklow eGlendalough, edume ngamachibi ayo amabili nomoya ongokomoya. Emzaneni wezindela, buyisela ingqondo yakho emuva kulokho iGlendalough okumelwe ukuba yayinjalo ngesikhathi sayo - lapho kwakuyindawo yokubalekela izindela ezazifuna ukuthula. Kepha njengoba uzulazula ungene emagqumeni aseduze, gwema ukucabanga ngoSt Kevin owadonselwa lapha ngekhulu lesithupha ngokuthula nobuhle bezwe. Hamba onqenqemeni lwamanzi echibini elingaphezulu, ngaphambi kokuya emagqumeni aluhlaza okotshani azungeze impophoma yePoulanass, egeleza kahle emadwaleni angamamoss.
Ziphathe ngokudla kwesimanje esimweni sokwamukela nokukhululeka seVanilla Pod eKells.
Isifunda EsipheleleUkuvakasha kokuqalaIzinto Ozozenza
Joyina Amahhashi Aseceleni KwamaWarriors Ase-Ireland noHeros
Imibono Yosuku Lobaba Yobaba Wakho Kildare
Izinto Ezinkulu Eziyishumi okufanele zenziwe Around Athy